Ganacsiga Caalamiga ah - VANTAGE | Iskuulada Dadweynaha Minnetonka
Ardayda waxay ku lug yeeshaan waayo-aragnimada dhabta ah ee jawiga sare ee baahida xirfadeed, ay ka mid yihiin tartanka Shark Tank iyo booqashooyinka xirfadleyaasha goobta.
Waxay ku qaataan labada Semmester-ka inay lataliye ka noqdaan mashruucyada ay wadaan iskaashatada, baarista iyo xalinta dhibaatooyinka ganacsiga. Ardaydu waxay bartaan fikradaha aasaasiga ah ee dhaqaalaha, cilmi baarista ku dhaqanka ugu wanaagsan, farsamooyinka qancinta, kuhadlida dadweynaha iyo isgaarsiinta wax ku oolka ah. Ardaydu waxay sahamiyaan mabaadiida ganacsiga iyo shaqooyinka iyagoo xooga saaraya hal abuurka farsamada, maareynta howlaha, suuq geynta, maareynta kheyraadka aadanaha iyo maalgelinta. Barnaamijkan waxaa lasiiyaa dhalinyarada iyo waayeelka.
Sanad-sanadka oo dhan, koorsada amaahda seddexda ah ayaa kasbata:
Sem Semar (AP Seminar) (hal dhibcaha Ingiriisiga fasalka 11aad ama 12aad)
AP Microeconomics (hal darajo Daraasaadka Bulshada)